« Guacamole » tsy mampatavy
Mampihena tena amin’ny karibaonetra, azo atao tsara!
Manafaingana ny fandoroan’ny vatana kaloria ny metabolisma miasa haingana. Manan-danja ao anatin’ny dingana fampihenan-tena araka izany ny manafaingana azy. Ireto misy zava-pisotro anankiroa ampiasana karibaonetra manafaingana ny fiasan’ny metabolisma ka mampihena haingana.
Fomba 4 tsotra kely, mandoro tavy haingana
Azo atao tsara ny manampy ny vatana handoro tavy. Ireto misy teknika ahafahana mandoro tavy haingana.
« Smoothie » paoma na dité kanelina isa-maraina dia mihena
Tsy manatsara ny bika ivelany fotsiny akory ny fampihenan-tena fa tanjona amin’izany koa ny fahasalaman’ny ao anaty. Manampy hanatratra izany tanjona izany ny fampiasana ireo zava-pisotro manadio sady mampihena amboarina ao an-trano.
Zava-pisotro amin’ny romarin sy sakamalaho : mampihena kibo haingana
Ny tavy miandrona eo amin’ny kibo no farany sarotra esorina indrindra amin’ny vatantsika olombelona. Soa fa mikaroka fomba hanalana ny tavy eo amin’io faritra io ny manam-pahaizana maro. Anisan’ny fomba hanafisahana ny kibo hitan’izy ireo ity atoro anao ity :
Limonady amin’ny sakamalaho, mampihena haingana be
Efa ela ny sakamalaho no ampiasaina ao anaty fampihenan-tena. Maromaro rahateo ny voka-pikarohana natao mahakasika ny voka-tsoa entin’ny sakamalaho ao anatin’ny fampihenan-tena atao. Ahoana kosa no hihinanana azy, atoronay anao :
Smoothie maitso karazany 4 mampihena haingana
Tsy mahomby ny zava-pisotro voalaza fa mampihena raha tsy mahafeno ireto manaraka ny vokany : manapaka ny fahazotoan-komana, misoroka ny fitahirizan’ny vatana rano ao anaty, manadio ny taova ary mandoro tavy. Mahafeno ireo rehetra ireo kosa ireo zava-pisotro manaraka ireto ka azonao ampidirina tsara ao anatin’ny regime fampihenan-tena arahinao
Inona no mampihena haingana? …Ireo fomba tsotra 5 tena mandaitra!
Mahatratra 1,9 miliara ny isan’ireo olona manana olona amin’ny hatavezana eran-tany raha ny salan’isa vao nivoaka farany ary anisan’ny firenena misedra izany olana izany koa ny eto amintsika. Nanaovan’ny mpikaroka fanadihadiana ity olana mahazo olona maro ity ka ireto ny vahaolana hitan’izy ireo :
Araka ny nampahafantarina anao tao anatin’ny fandaharana “taiza vatana” tao amin’ny Top Radio 102.8, dia indro ny fomba iray azo hihinanana ny zavoka, hampihenana ny lanja.
Karazana saosy azo anomezana tsiro ny sakafo sasany ny “guacamole”. Maivana ary tsy ahiana hampitombo lanja ity karazany iray atolotra anao ity.
· Zavokà masaka tsara 2
· Tongolo madinika kely (échalotte), 1
· Tongolo gasy, hasiny 1
Potsehina tsara amin’ny sotrorovitra ny zavokà ary kendrena tsy hisy hitambaingana mihitsy. Afangaro aminy avy eo ny ranom-boasarimakirana. Tetehina madinika ny tongolo kely sy ny tongolo gasy, rehefa voavaofy. Tetehina madinika kely ihany koa ny voatabia. Afangaro ao anaty lovia jobo amin’izay ireo akora rehetra ireo, asiana sira sy dipoavatra. Apetraka ao anaty vata fampangatsiahana, raha mbola tsy aroso.